आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल असोज २९ गते। सोमबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 Last updated Oct 14, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर १५ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ कौलाथ्व। आश्विन शुक्लपक्ष। तिथि– षष्ठी, ८:५५ बजेउप्रान्त सप्तमी। नक्षत्र– मूल, १७:२० बजेउप्रान्त पूर्वाषाढा। योग– शोभन, १०:०३ बजेउप्रान्त अतिगण्ड। करण– तैतिल, ८:५५ बजेदेखि गर, २१:४१ बजेउप्रान्त वणिज। आनन्दादिमा लुम्ब योग। चन्द्रराशि– धनु। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:०४ बजे, सूर्यास्त– १७:३३ बजे र दिनमान २८ घडी ४३ पला। शारदीय नवरात्र। विल्वपत्र निमन्त्रण। सरस्वतीलाई आवाहन गर्ने दिवस।
तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंका दृष्टिकोणको समर्थन गर्नेछन्। यो दिन तपाईंको प्रेम जीवनको मामलामा शानदार छ। प्रेम गरि राख्नुहोस्। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। आज बिहान तपाईंलाई केही प्राप्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंको आफ्नो सम्पूर्ण दिन रमाइलो हुनेछ।
तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो दिनको लागि बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै खर्च गर्ने झुकावमा विचार गर्नुहोस्। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। आज तपाईंलाई प्रेम सबैको विकल्प हो भन्ने महसुस हुनेछ। घरमा संस्कार / हवन / शुभ समारोह गरिनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले हेप्नेछन् र यसले गर्दा तपाईंले विवाह जबरजस्ती तोड्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। तपाईंमध्ये कसैले गहना वा घरको उपकरण खरिद गर्ने सम्भावना छ। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। टाढाको यात्रा आरामदायक हुनेछैन – तर महत्त्वपूर्ण सम्पर्क बनाउन मद्दत गर्नेछ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
आफूलाई केही रचनात्मक कार्यमा संलग्न गर्नुहोस्। तपाईंको निष्क्रिय बस्ने बानी मानसिक शान्तिको लागि घातक साबित हुन सक्छ। तपाईंले बचत हुने लगानीमा लगानी गर्नुभयो भने राम्रो पैसा कमाउनु हुनेछ। रिस छोटो-पागलपन हो र यसले तपाईंलाई ……… गराउन सक्छ भनेर तपाईंले जान्नु पर्ने समय हो तपाईंले प्रेममा हरेक दिन पर्ने आफ्नो प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। तपाईंले आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर दिनको अन्तमा तपाईंको जोडीले तपाईंलाई माया दिनेछन्।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। परिवार समस्याग्रस्त हुन सक्छ। तपाईंको पारिवारिक जिम्मेवारीको लापरवाहीले उनीहरूको क्रोध निम्त्याउन सक्छ। कठिन प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं निश्चित भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनकि आज तपाईंको दिन हो। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। महिला भेनसबाट आएका हुन् र पुरुषहरु मंगलबाट। तर आज भेनस र मंगल एक-अर्कामा पग्लेका छन्।
तपाईंको लागि मान्छेलाई जबरजस्ती काम गर्ने बाध्य नगराउनुहोस्। तपाईंलाई असीमित आनन्द दिने अरूलाई गर्न चाहेको र चासोको बारेमा सोच्नुहोस्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। प्रेम-सङ्गति र सम्बन्ध गाँसिनेमा वृद्धि हुने। तपाईंका मुस्कानको कुनै अर्थ छैन – तपाईंका हास्यको कुनै आवाज छैन – तपाईंलाई सामिप्य नहुनाले मुटुले धडकन बिर्सन्छ – तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। कसैलाई भेट्ने आफ्नो योजना आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले गर्दा बिग्रियो भने, तपाईंले सँगै समय बिताउने अर्को राम्रो समय पाउनु हुनेछ।
तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् – र आज आवश्यक वस्तुहरू मात्र किन्नुहोस्। तपाईंले छोराछोरी वा तपाईं भन्दा कम अनुभवीहरूसँग धैर्य धारण गर्नुपर्छ। कसैले तपाईंको प्रसंशा गर्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो जीवनसाथीको न्यानो माया महसुस गर्नु हुनेछ।
तपाईंको ऊर्जा स्तर उच्च हुनेछ र रोकिएका कार्यहरू पूरा गर्न यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। आफन्तहरूको घरमा भेटघाटको लागि छोटो यात्रा गर्नाले आफ्नो दैनिक व्यस्त तालिकाबाट सान्त्वना र विश्राम मिल्नेछ। अरूको हस्तक्षेपले तनाउ उत्पन्न हुनेछ। तपाईं साँच्चै नै आज लाभ उठाउन चाहनुहुन्छ भने – अरूले दिएको सल्लाह सुन्नुहोस्। दैनिक आवश्यकताहरू पूरा नगर्नाले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज तनाउ हुनेछ। यो भोजन, सरसफाइ, अन्य घरेलू काम आदि जस्तै कुराहरूको बारेमा हुन सक्छ।
आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। कुनै पनि लामो अवधिको निवेश नगर्नुहोस् र आफ्ना असल मित्रसँग बाहिर गएर केही सुखद समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। बच्चाहरुले तपाईंलाई घरेलू काम पूरा गर्न मद्दत गर्नेछन्। प्रेमको शक्तिले तपाईंलाई प्रेम गर्ने कारण प्रदान गर्दछ। तपाईंसँग राय मागे नलजाइकन दिनुहोस् किनभने यसको लागि तपाईंको अत्यधिक कदर गरिनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
धेरै क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाम तिर ध्यान दिनुहोस्। यो एउटा अर्को धेरै ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन हो र अनपेक्षित लाभ हुने सम्भावना छ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। तपाईंको ऊर्जाको स्तर उच्च हुनेछ – किनकि तपाईंको प्रियले धेरै आनन्द लिएर आउनेछ। आफ्नो बाटोमा आएका सबैलाई विनम्र र आकर्षक भइदिनुहोस् – केही चुनिन्दाहरूले मात्र तपाईंको जादूले भरिएको आकर्षणको रहस्य थाहा पाउनेछन्। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो जिद्दी स्वभावले तपाईंको आमाबाबुको शान्ति भंग पार्न सक्छ। तपाईंले तिनीहरूको सल्लाह पालन गर्नु आवश्यक छ। गालीबाट बच्नको लागि आज्ञाकारी हुनु उचित छ। तपाईंको प्रेमी जीवनले तपाईंको लागि आज साँच्चै नै अद्भुत केही ल्याउनेछ। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ!
भाग्यमा निर्भर नहुनुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्यको सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि भाग्य तपाईंसँग कहिल्यै नआउने अल्छी देवी हो। यो आफ्नो स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि तपाईंले आफ्नो वजन नियन्त्रण गर्ने र पुनः व्यायाम सुरु गर्ने सही समय हो। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। आफ्ना बच्चाहरुसँग आफ्नो बहुमूल्य समय बिताउनुहोस्। यो खुशी हुने सबैभन्दा राम्रो तरीका हो। तिनीहरू असीमित आनन्दको स्रोत हुनेछन्। प्रेम महसुस गर्ने र आफ्नो प्रियसँग बाँट्ने भावना हो। तपाईं आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सामानको अतिरिक्त हेरचाह गर्न आवश्यक छ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै तपाईंको लागि स्वर्गदूत हो, र तपाईंलाई यस कुराको आज थाहा हुनेछ।